११ प्रयासमा पहिलोपटक हारेका नरसिंह
कहिले स्वतन्त्र त कहिले दलबाट उठेर लगातार १० पटकसम्म वडाध्यक्ष बनेका ललितपुरका ८१ वर्षीय नरसिंह व्यञ्जनकार आफ्नो ११ औं प्रयासमा असफल भए ।
ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १० (कुपण्डोल)बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका नरसिंहलाई यसपालि आफ्नै भतिजा रविनमान व्यञ्जनकारले २ सय ८२ मतले पराजित गरे । कांग्रेस उम्मेदवार रविनमानले ८ सय २५ मत ल्याउँदा नरसिंहले ५४३ मत पाए ।
नरसिंह आफूलाई भतिजाले मात्र नभई दलहरू मिलेर हराएको बताउँछन् ।
'मलाई भतिजाले हराएको होइन, कांग्रेसले हराएको हो । जनताले मलाई हराएका होइनन्, दलहरू मिलेर हराएका हुन्,' व्यञ्जनकारले लोकान्तरसँग भने, 'दलहरूको ५० वर्षदेखिको योजना बल्ल सफल भयो । अब यसको परिणाम केही दिनपछि नै देखिनेछ।'
२०२९ यता उनले पहिलोपटक चुनावमा पराजय व्यहोरेका हुन् । यसबीचमा उनी सधैँ स्वतन्त्र मात्र उठेका भने हैनन् । २०४९ मा कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेर जितेका नरसिंह २०५४ यता स्वतन्त्र रूपमा चुनावमा सहभागी हुँदै आएका थिए ।
यसबीचमा एकपटक उनलाई राजाले मनोनित गरी वडाध्यक्ष बनाएका रहेछन् । अन्तिमपटक २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा उनी वडा नम्बर १० बाट वडाध्यक्ष चुनिएका थिए ।
अलि मेहनत गरेको भए यसपालि पनि चुनाव जित्न त्यति सारो समस्या थिएन भनी दाबी गर्ने व्यञ्जनकार अब भने आफ्ना लागि समय दिने सोचमा छन् ।
'यसपटक मैले नै धेरै प्रयास नगरेकाले हारेको हुँ । म पदमा नभए पनि जनताको सेवा भने गरिरहनेछु,' व्यञ्जनकारले भने, 'अब फ्री भएँ । बल्ल मैले आफ्ना लागि समय दिन पाउनेछु ।'
देशमा व्यवस्था बदलिए पनि जनताको जीवनस्तर नबदलिएकोमा उनी चिन्तित छन् । 'एउटा जग्गा नामसारी गर्न सिधै वडा अध्यक्षले सिफारिश गरिदिए पुग्नेमा एक हजार तिर्नुपर्छ,' उनले भने।
'पहिले स्थापितले सुझाव लिन्थे,यसपालि बालेन आए'
नरसिंह व्यञ्जनकारलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका प्रत्यासी बालेन्द्र साहको राजनीतिक गुरुका रूपमा पनि प्रचार गरिएको छ ।
व्यञ्जनकार मेयरमा उम्मेदवारी दिनुअघि बालेनले आफूसँग सुझाव लिएको स्वीकार्छन् ।
'बालेन मेयरमा उठ्नुअघि मलाई भेट्न आएका थिए । म मेयरमा उठ्न लागेको भने । मलाई उनको आँट गज्जब लाग्यो,' व्यञ्जनकारले भने, 'उम्मेदवारी दिनुअघि यहाँको नेवार संस्कृति, व्यवहार सबै विषयमा जानकारी लिन सुझाव दिएँ । देवालय, मठमन्दिर, गुठी सबैबारे बुझ्न भनें । नेवारले समेत नबुझेका देउतासमेत बालेनले बुझेर आएका रहेछन् ।'
आफूले देखाएको बाटोमा अगाडि बढेर बालेन काठमाडौंको मेयर चुनिन लागेका बेला नरसिंह खुशी छन् । 'जितेपछि काममा आउने बाधा व्यवधानलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउने छु । यी दलका नेताहरूले सहजै काम गर्न त कहाँ दिन्छन् र,' उनले भने ।
केशव स्थापितलाई पनि उनले पहिले विभिन्न सुझावहरू दिएका रहेछन् । 'केशवलाई पनि पहिल्यैबाट मैले सिकाएको हो, तर ऊ अहिले आफैँ ठूलो मान्छे भएर हिँड्यो,' व्यञ्जनकारले भने ।
व्यञ्जनकार काठमाडौंलाई अस्तव्यस्त बनाउनमा यहीँका नेवारहरूको भूमिका रहेको ठान्छन् ।
'काठमाडौं बिगारेको नेवारले नै हो। पहिले खेतैखेत देखिने स्वयम्भूबाट अहिले घर मात्र देखिन्छ । बाहिरका मान्छे जबरजस्ती काठमाडौंमा आएर बसेका होइनन्, नेवारले नै खेत बेचेर बस्न दिएका हुन् । टुँडिखेलवरिपरिका फूटपाथका व्यापारी कहाँ बस्छन् ? तिनै नेवारकोमा हैन ?' व्यञ्जनकारले भने, 'आफैँ बाहिरको मान्छेलाई काठमाडौं बोलाउने, आफ्नै घरमा भाडामा राख्ने अनि बाहिरका मान्छेले काठमाडौं बिगारे भन्न सुहाउँदैन ।'